Best afụ akpa Manufacturer na Factory | Huanna
Aha aha: Compostable Mailing Envelopes Afọ Mechiri Emechi akpa Typedị :dị: Ihe Nzipu ozi
Agba: White, Yellow, Green, Customizable Ihe: PLA na ihe na-emebi emebi
Ebe Mmalite: Shanghai, China Brand aha: Naturepoly
Nọmba nlereanya: HNM-4036P Ngwa: Express Service Packaging, E-azụmahịa, pallet Wrapping, N'ịga Service
Nha: Ngwaahia Size Ọkpụrụkpụ: Ndị Ahịa Na-achọ
Nnyefe: 30-40 ụbọchị Mbukota: Ngwaahia
Njirimara: Achọpụta ihe, Compostable, Anya-mmiri, Strong nrapado, Opaque, zuru okè Printing, Security Typedị azụmahịa: Emeputa
Akpa akpa anyị bụ nhọrọ kachasị mma maka ihe onwunwe na-emebi emebi ma ọ bụ dị oke ọnụ ahịa. Enwere ọnọdụ dị iche iche eji eme ihe, dịka nzipu ozi ihe bara uru dịka ekwentị, nkwakọ ngwaahịa na-emebi emebi dịka iko. Ọzọkwa, enwere ike iji ya debe ihe ndị dị oke ọnụ, n'ihi na ọ bụ ihe na-adịghị mmiri na dobe. Akpa afụ nwere akwa akwa mmiri na-eguzogide ma dị fechaa, yabụ enweghị obi abụọ ọ bụla na ha nwere ike ịchekwa ngwaahịa gị mma ma dịkwa mma ka ị na-echekwa ụgwọ mbupu. Anyị nwere ike hazie agba na nha nke afụ akpa dị ka ahịa ina. Anyị ga-eweta ngwọta dị iche iche ozugbo enwere ike igbo mkpa ndị ahịa. Ma ọ bụghị ya, anyị nwere ọtụtụ ndị tozuru okè iji kpọtụrụ ndị ahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị nwere ike ịmepụta akpa afụ nke nkọwa na agba dị iche iche. N'ezie, logo na e mere ihe nakawa etu esi nwere ike e biri ebi na ya. Ya mere, ọ dị mma maka azụmahịa na nke onwe. Karịsịa maka izipu ngwaahịa 3C. Ngwongwo eji akpa afu bu ihe okike, ya mere ha bu 100% compostable and biodegradable. Jiri akpa afụ anyị iji chebe nnyefe gị.
The pụtara ìhè uru nke anyị afụ akpa bụ biodegradable ihe onwunwe. Usoro mmepụta ihe enweghị mmetọ ọ bụla, ngwaahịa ikpeazụ nwere ike bidegrade ka ọ dịghachi ọhụrụ na okike. N'ebe a na-eme ka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe, akpa ndị ahụ mebiri kpamkpam na ụbọchị 180. N'ebe a na-eme ka ụlọ na-eme mkpọtụ, akpa ahụ na-agbada kpamkpam n'ihe dịka afọ 2. Na gburugburu ebe obibi, akpa na-ewe ihe dịka afọ 3 ruo 5 iji weda n'ala kpamkpam.
Companylọ ọrụ anyị na-aga n'ihu ijere ndị ahịa ozi dị elu, ọnụahịa asọmpi na nnyefe oge. Anyị ji obi anyị niile anabata ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile iji kwado anyị ma mee ka azụmahịa anyị bawanye. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n’ihe anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị ga-achọ ịnye gị ozi ndị ọzọ.
Nke gara aga: Mma mma Plastic Kechie Packaging - PLA ahịhịa - Huanna
Osote: CPLA ịkpụ